सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लागेपछि एमालेले बनायो खतरनाक 'काउण्टर प्लान' !
ARCHIVE, POLITICS » सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लागेपछि एमालेले बनायो खतरनाक 'काउण्टर प्लान' !
काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लागेपछि एमालेले खतरनाक काउन्टर प्लान बनाएको छ । एमाले स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एमालेले शुशिला कार्की निलम्बन भयेअप्ची प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग दर्ताको तयारी थालेको छ ।
एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले आइतबार सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतका कानुन व्यवसायीसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् । यदी यस्तै महाअभियोगको सृंखला अगाडी बढ्ने हो भने यो देशकै लागि खतरनाक हुन सक्छ ।